Kursi uu buuq hareeyay oo maanta lagu dooranayo Dhuusamareeb | Universal Somali TV
Kursi uu buuq hareeyay oo maanta lagu dooranayo Dhuusamareeb
Guddiga Doorashada Galmudug ayaa maanta qabanaya doorashada laba kursi oo kale oo ka tirsan kuraasta Golaha Shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay Galmudug.
Kuraasta kala ah #HOP043 iyo #HOP067 ayay maanta doorashadoodu ka dhici doontaa hoolka doorashada ee Magaalada Dhuusamareeb.
Kursiga uu tirsigiisu yahay #HOP067 ayaa waxaa hareeyay buuq, iyadoo Taliyaha KMG ee NISA, Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud (Yaasiin Farey) uu doonayo in kursigaasi uu qaato.
Nabadoon Cali Xasan Cali (Cali Jeesto) ayaa sheegay in isagoo ah nabadoonkii beesha laga hor istaagay inay taggaan goobta doorashada lagu qabanayo.
"Waxaan ahay nabadoon beelaha oo lagu metelo kursiga tirsigiisu yahay 67 oo deegaan doorashadiisu tahay Dhuusamareeb, waxaana lagu wargeliyay kursigii in la soo dhejiyay, waxaanu u istaagnay sidii doorasho hufan aanu u qaban lahayn." Ayuu yiri Nabadoon Cali Xasan Cali.
Waxa kaloo uu yiri "Akhyaartii iyo intii talo ku lahayd oo dhan ayaan is wacnay, waxaanu diyaarinay ergadeedii, annaga oo hawsheedii ku jirna ayaa ergo kale iyo rag ciidamo ah oo is wataa meeshii taggeen, anagana in aan tagno ciriiri ayaa nalaga geliyey, intaasaan ka cabanaynaa oo kursigaas saxiixihiisii anigu aan ahay."
Cabashada ka soo yeereysa dhaqanka ee ku aaddan soo xulista ergada ayaad mooddaa inay isa soo tareyso. Guddiga HIrgelinta Doorashooyinka Heer Federaal ayaa xalay sheegay inay baari doonaan cabasho ay sheegeen in la soo gaarsiiyay.
Guddiga Doorashada Galmudug ayaa toddobaadkan shahaadada musharaxnimada guddoon-siiyay tiro musharaxiin ah, oo u taagan kursiga #HOP067.
Ra'iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa war uu xalay soo saaray waxaa uu Guddiyada Doorashooyinka ku faray inay xil iska saaraan waajibaadka loo igmaday, doorashaduna ay noqoto mid daahfuran, xor iyo xalaal ah.
Kan-xigaProf. Jawaari "Kursiga 103 waxa bixin...
Kan-horeRa&#039;iisal Wasaare Rooble oo war k...
65,220,703 unique visits